Zvichiri zvekare, asi iyi ndiyo iPhone 7 chassis? | IPhone nhau
Nhasi tiri pazuva rekupedzisira raKukadzi uye mangwana tichapinda mumwedzi umo, kunze kwekushamisika kukuru, iyo 4-inch iPhone (parizvino inozivikanwa seIPI SE) uye itsva 9,7-inch iPad ichaunzwa. inozodaidzwa kuti iyo Pro Pro). Kana iyo nzira yemugwagwa yemakore apfuura ichiteverwa, inotevera inotevera kuvhurwa kweapuro kuchaunzwa munaGunyana. Ichiri yakanyanyisa kukurumidza kune zvikamu zveinotevera "yakajairwa" saizi iPhone kuti itange kuoneka, asi veFrance vezvenhau hapana nzvimbo. atumira mimwe mifananidzo iyo (ine mukana mushoma) inogona kutiratidza iyo iPhone 7 chassis.
Sekureva kwaNoWhereElse, iyo mifananidzo yakapihwa naTyam anobva kuChina, uyo anoshanda ku subcontracted kambani iyo inoshanda zvakanyanya ne Apple neHuawei zvishandiso. Sekureva kwemushandi weChinese, iyo simbi furemu inoratidzwa mumifananidzo yaizobva mukutanga kumhanya kweiyo iPhone 7 uye yaizove ne 5.2-inch screen. Chero zvazvingaitika, pane zvimwe zvinoratidza kuti iyi furemu yakanga isina kugadzirirwa iyo iPhone 7.
Iyo furemu haitaridzike senge ndeyayo iyo iPhone 7
Chigadzirwa chinoshandisa furemu yemufananidzo chinosanganisira 3.5mm chiteshi. Zvinoenderana nerunyerekupe, iyo iPhone 7 inosvika isina chiteshi chefoni, saka chero iyo inotevera iPhone ine 3.5mm chiteshi kana iyi furemu haisi iyo iPhone 7.
Ukuwo, vhoriyamu mabhatani akatarisana pasi kwavari ivo vari pa iPhone uye hapana switch yekuisa chishandiso parunyararo icho, kunyange hazvo chiri chokwadi kuti mitemo kana huwandu huripo kuvatyora, hapana chinoita kuti tifunge kuti Apple inotarisira kubvisa switch inobatsira kwatiri.
Hapana imwe nzvimbo yakagadzirirwa kuenda pasi penyaya uye ichifananidza iyi bezel neiyo yeiyo Huawei P9 kuti aone kuti zvinoenderana, saka haatendi kuti chinhu chaakatumirwa nemumwe wake wechiChinese ndiiyo iPhone 7. Sezvatakambotaura pakutanga, kare-kare, uye Apple inodzora nguva dzese dzekunyepedzera zvigadzirwa. Zvingangodaro, isu tichiri kufanira kumirira kusvika muna Chivabvu kuti titange kuona izvo chaizvo zvikamu zveinotevera iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Zvichiri zvekare, asi iyi ndiyo iPhone 7 chassis?
Tesla anoshandira mumwe munhu wepamusoro aishanda paApple machipisi